itnadamtui: Window7မှာ မိမိစိတ်ကြိူက် Pin Code များဖန်တီးခြင်း
Window7မှာ မိမိစိတ်ကြိူက် Pin Code များဖန်တီးခြင်း
ကျွန်တော်တို့ Window7မှာ မိမိတို့ ကြိူက်တဲ့ Folder တွေကို Taskbar မှာ တွဲချိတ်ထားဖို့(pin) လုပ်ထားဖို့ဆိုတာ တိုက်ရိုက်လုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလေးတွေတော့ ရှိပါသေးတယ်။ မိမိအမြဲတမ်း သုံးနေကျ folder လေးတွေကို Taskbar လေးမျာ တွဲချိတ်(pin) ထားလိုက်ရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ လိုချင်တဲ့နေရာ ရောက်အောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ မိမိသုံးနေကျ Folder တွေကို Taskbar မှာ ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့ အတွက် Desktop ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထားချင်သူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။ Window7သုံးနေရပေမယ့် Apple window သုံးနေရတဲ့ ပုံစံလေး မြင်တွေ့ရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။
1. ပထမဆုံး ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ။
2. ဒေါင်းလုပ်ချပီးတာနဲ့ Folder ထဲမှာပါတဲ့ .exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို Run လိုက်ပါ။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံလေးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
1. Stack Name နေရာမှာ မိမိကြိူက်နှစ်သက်ရာ နံမည်ပေးပါ။
2. Path မှာ မိမိ Pin(တွယ်ချိတ်) ထားချင်တဲ့ Folder ရှိတဲ့နေရာကို သွားပြီး ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာ ကျွန်တော်ဆိုရင် Control Pannel ကိုရွေးပေးထားပါတယ်။
3. Open As မှာ Grid, Auto & Stack ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ မိမိကြိူက်နှစ်သက်ရာ တခုခုရွေးနိုင်ပါတယ်။ Direction မှာ Up,Down,Left & Right ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ကြိူက်နှစ်သက်ရာ တခုရွေးပါ။ Switch to grid after မှာ မိမိ ထည့်ချင်တဲ့ Item အရေအတွက်တွေ သတ်မှတ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
4. Force open positon မှာ X ၀င်ရိုးနဲ့ Y ၀င်ရိုးမှာ မိမိကြိူက်သလောက် သတ်မှတ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
5. Create Stack ဆိုတာလေး လုပ်ပီးတာနဲ့ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါပီ။
6. Create shortcut ဆိုတာလေး နှိပ်ပီး Shortcut လေး လုပ်ထားပေးလို့ ရပါတယ်။
7. အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ OK ပေးလိုက်ပေါ့။
အားလုံး ပြီးသွားရင် မိမိ Shortcut ပေးထားတဲ့ နေရာလေးကနေ Right click ထောက်ပီး Pin to Taskbar ဆိုပီး လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ အစအဆုံးအကုန်လုံး အဆင်ပြေသွားပါပီ။
Indsendt af itnadamtui kl. 19.35
Etiketter: Window 7, windows